Ogaden News Agency (ONA) – Faallo: Heshiiska ONLF & Gimpot 7 ee Germany oo Sidaa ku Hirgalay, Waa Dhamaadka Taliska Woyaanaha! By- Xaaji M/rashiid.
Faallo: Heshiiska ONLF & Gimpot 7 ee Germany oo Sidaa ku Hirgalay, Waa Dhamaadka Taliska Woyaanaha! By- Xaaji M/rashiid.
Posted by Daljir	/ May 29, 2017
Halgamayaal Rag iyo Dumarba meel aad kala joogaanba idiin ma sheegi doono wax cusub oydaan ogayn, laakiin waxaa wanaagsan in markay wax kusoo kordhaan saaxada halganka lagu xoreynayo Ogadenya, inay bulshada Rayadka ahi ka dhiibato aragtiideeda ku aadan dhacdadan ugubka ah. Waxaad si hoose iyo si koraba ula socotaan marxaladda xasaasiga ah ee uu marayo dalka Itoobiya ee xaalku ku fooraro, haduu Calan ahaa, haduu Siyaasad ahaa, haduu Dhaqaale ahaa iyo haduu Ciidan ahaaba.
Shacabka Soomaalida Ogadenya iyo Qowmiyadaha kale ee ku hoos jira Gumaysiga Itoobiya, waxaa soo dhexmaray colaado Taariikhda galay iyagoo mid waliba caruurtiisa ku seexiyo cadowgaa waa Soomaali iyo cadowgaa waa Axmaar. Soomaaliduna cid kasta oo Itoobiya sheegata waxay u taqaanay Axmaar. Waxaa colaadaha hurinayay oo ka dambeeyay siyaasadda hagta talada wadanka, iyagoo soo abaabuli jiray duulaanka lagu soo qaado umadda Soomaalida Ogadenaya. Taasi waxay keentay inay si aad ah usii fogaadaan Soomaalidu nacaybka ay uhayaan Itoobiyanka uu sii karaar qaato markay maqlaan magaceeda.
Dadwaynaha Soomaalida Ogadenya waxay si cad u diideen Guumaysiga hagabsanaya ee Geeska Afrika ee Qabiilka Tigreegu horboodayo. Jawaabta ay ka bixiyeen gardaradaas ma’ahayn hadal oo kaliya ee waxaa waheliyay ficil iyo gacan kahadal Taariikhda galay oo maraya 22 sano oo xidhiidh ah, dhanka kalana waxaa garab socday duruufihii abid ugu adkaa oo lasoo darsa halgankaas iyo bulshadiisa. Midda sida wayn guumaystaha uga fajicisay ayaa aheyd, markay ka quusteen inay arkaan Madaxda Jabhadda ONLF oo madaxa u raaricinaya hal marna ha ahaatee!
Hogaanka sare ee Jabhada Wadanida Xoraynta Ogadenya (JWXO) ayaa Geed dheer iyo mid gaanba ufuulay siday shucuubta ku dhaqan Geeska Afrika oo dhan utusi lahaayeen inayna Tigreeegu dawlad ahayn, balse ay yihiin Qowlaysato Munaafiqiin ah oo dadka maxasta ah nolosha ku aasa, hantidoodana xalaaleysta.
Muddo dheer kadib waxay maanta ku guulaysteen inay toosiyaan Qowmiyadaha dulman ee ay ka midka yihiin, Oromada, Axmaarada, Gambeela, Benishaangul, Sidaama iyo kuwo kale. Waxaa intaa sii raaca inay yagleeleen Urur laandheere ah oo labaxay PAFD kaas ah Dallad ka dhaxeysa oo waafaqsan maah,maahdii Soomalida ee aheyd Geeljire Geela wuu wada jirtaa wuuna kala jirtaa.
Waxaa jira Ururo kale oo iyaguna dhan isu raacay, waxaana ugu tun wayn ka Qowmiyadda Axmaarada ee la yidhaaho Patriotic GimPot 7. Qowmiyadan ayaa horay loogu baaqay inay kusoo biiraan Fikirka isbaheysiga PAFD, balse way ka caga jiideen. Waxaa dhici karta inuu ka dhex guuxayay isla,wayni waqtigeedii lasoo dhaafay. Dantu waa seeto oo markii Dabka lasaaray dad iyo Duunyo waxay lahaayeen ayay hadda u muuqdaan inay fahmeen muhiimadda ay leedahay In Rigiimka isku meel looga soo wada jeedsado.
Masalada ku saabsan inay is hor fadhiistaan Ururka Axmaarada ee ku dhaqan waqooyiga Itoobiya iyo Ururka ONLF waa arrin aan aad usoo dhaweynayno, waxayna muujinaysaa inay qowmiyaddii wax guumeysan jirtay ay maanta dhulka taalo, meesha Ururka ONLF ay u tahay horumar siyaasadeed mar haduu gaadhay inay
qowmiyadii axmaaradu Talo waydiiyaan. Waxaa kale oo iyana muuqata inay xubin firfircoon ka noqon doonaan meesha lagu gorfaynayo siyaasadda mustaqbalka dhow ee Itoobiya.
Heshiiska iyo is fahanka dhexmaray labada Urur wuxuu fashiliyay siyaasaddii Woyaanaha ee aheyd inaan la helin wax isku fikir ah oo iyaga kasoo horjeeda. Waxaa kale oo heshiiskani keenaysaa in dawladaha daneeya siyaasadda Itoobiya ay helaan mucaarad mideysan oo leh meel loogu soo hagaago, si ay meesha uga saaraan kooxda maskaxdu fuuntowday ee 26 sano kadib wali usii dhaqmeysa qaabka mooryaanimada ah.
Heshiiskani waxaa kale oo uu cadeyn u yahay heerka ay gaadhsiisantahay ciqaabta lamariyay shucuubta kala duwan ee lagu laayay Canshuurtii iyaga laga qaaday! Si kastaba ha ahaatee waxaa la gudboon shacabka Soomaalida Ogadenya inay ku kaslsoonaadaan siyaasadda Madaxdooda ee ilaahay ku maneystay Run sheegnimada iyo daacadnimada, hadeyna taasi jirina waqtigan lama heleen cid wada xaajood gasha, saaxadana kama muuqdeen wax wata magac Soomaaliyeed. Ahristow waa dhab hadalkaasi!
Dhanka dawladaha ku kacsan ee arkay in taliska woyaanuhu wuxuush yahay, waxaa kamida ah Masar, Eriteriya, Koofurta Sudaan iyo Soomaliya. Waxyaabaha yaabka leh ee lagu arkay Woyanaha waxaa kamid ah inayna insaaniyada u ogolayn xataa biyo la cabo! Umadihii ilaahay way ka yaabeen, waxaana lagu tilmaami karaa KANSAR ay waajib tahay in laga suuliyo Geeska Afrika. Duqii Maraykan ahaa ee ay ku tiirsanaayeen waxaa la sheegay inuu laftiisu Indhaha u gurxiyay, Danihiisiina meelo kale kula bahoobay.
Hadaan abaaro Laf-dhabarta Faallada waxaad bulshooy Makhraati katihiin inuu Ururka Itoobiya u taliya ee TPLF uu marar kala duwan hor fadhiistay Wufuudii ONLF. Waxaa kale ood Makhraati katihiin inuu Ururka Oramada ee OLF hor fadhiistay (JWXO/ONLF), Daladna ay wada sameysteen. Waxaad sidoo kale maanta Aragtaan in Awlaadii Mililik iyo Xayle Salaase ay hor fadhiisteen (JWXO/ONLF) kulankii Jarmalka kadhacay dhawaan. Waxaan sidaa ugu nuux nuuxsanayaa arinata , waa markii ugu horeysay oo la arko Halgan Soomaalida Ogadenya oo heerkaas gaadha. Hadalka oo kooban Ururna uma shaqeynayo Urur kale ee Urur walba dantiisaa meesha la gashay. Si kastaba ha ahaatee umadda Soomaalida Ogdenya ayaa si wayn uga dhur sugaysa Ururwaynaha (JWXO/ONLF) iyo siyaasadiisa, mana jirto wax ay xornimo ku doorsan lahaayeen.
Waxaa lawada fahmayaa in cid kasta oo dooneysa inay gaadho Dagal kale oo dani ka gashay ay qasab ku tahay inay hesho waddo ay qaado si ay uga badbaado Qarda jeexidda waqti badana uga lumin. Tusaale- Kasoo qaad Diyaarad duushay waxay u baahantahay jiheeye sax ah iyo waddo cirka marta. Kasoo qaad Markab Badda maaxa, wuxuu u baahanyahay inuu helo waddo Badaha dhexmarta oo ku toosisa Dakadii u higsanayay. kasoo qaad Baabuur safar ah waa inuu helaa waddo qoran. Kasoo qaad adigoo Tuule ka caraabaya mid kalana u socda, waxaad u baahantahay waddo, hadii kale waxaad marti u noqon jab iyo luuf luuf.
Ujeedka aan usoo qaatay tusaalayaasha Waan inaan bulshada Soomalida Ogadenya ka dhaadhiciyo in cid walba oo xornimo doonaysa looga baahanyahay inay qaado wadada kaliya ee tagta Goobta barwaaqada ah ee Beerta Xorriyadda. Laakiin ogoowWadada tagta Goobtaas waa Qalin, Qori, Dhiig, Dhimasho, dhaawac, Dhidid iyo Fikir joogto ah, waana midda uu qaaday Ururwaynaha (JWXO/ONLF).
Guntii iyo gabagabadii Faallada, waxaan hoosta ka xarriiqayaa in hadii Qowmiyaduhu u midoobaan Cadowaga Woyaanaha ay taasi soo dedejin karto in xal siyaasadeed laga gaadho mashaqada ka aloosan waxa loo yeedho Itoobya ama hadii kale laguba kala yaaco.